IMicrosoft Surface Pro LTE isiyatholakala ukubhukelwa (hhayi eSpain) | Izindaba zamagajethi
IMicrosoft Surface Pro LTE isiyatholakala ukubhukelwa (hhayi eSpain)
Uma kunokuthile okufanele babe nakho, yebo noma yebo, imishini egxile ekuhambeni ukuhamba okunhlobonhlobo ukuze umsebenzisi, lapho esebenza ngaphandle kwekhaya noma ehhovisi, angalahlekelwa yilutho. Kuze kube manje, amakhompiyutha afana neMicrosoft Surface Pro ayentula inguqulo ehlome ukuxhumana ngeselula kwe-LTE / 4G. Noma kunjalo, ezinye izimakethe zizothola i- I-Surface Pro LTE.
Kuze kube manje, abasebenzisi ababefuna ukusebenza neMicrosoft Surface Pro ngaphandle kwekhaya babenezindlela ezimbili: thola isitolo esinokuxhumeka kwe-WiFi noma usebenzise inethiwekhi yeselula ye-smartphone yabo. Kodwa-ke, ngethuba lokusebenzisa amasevisi we-multiSIM anikezwa opharetha abaningi, Bekungaqondakali ukuthi abakwaRedmond abathathanga isinqumo sokuvula iMicrosoft Surface Pro LTE. Lokhu akusenjalo futhi ezimakethe ezinjenge-United States, Canada ne-Australia, sekuvele kungenzeka ukuthi ikubeke.
Amayunithi okuqala eMicrosoft Surface Pro LTE azofika ezandleni zabanikazi bawo ngenyanga kaMeyi. Intengo yokuqala ingu- $ 1.149 Futhi kuzoba nezinguqulo ezimbili kuphela: eyodwa eneprosesa yeCore i5 ne-4 GB ye-RAM. Ngenkathi inguqulo yesibili iyimodeli ene-8 GB ye-RAM (iprosesa efanayo) namandla okugcina angama-256 GB kwi-SSD. Lokhu kwahluka kwesibili kuzobekwa ngentengo ku- Amadola ka-1.499.
Khumbula ukuthi le thebhulethi engu-2-in-1 ayihlanganisi ikhibhodi engaphezu kwale ebonakalayo. Ngakho-ke, Uma ufuna ukuthola ikhibhodi yangaphandle, kuzofanele ungeze kuzo zombili izintengo okungeziwe kwekhava yekhibhodi yeSurface Pro. ESpain sikhuluma ngama-euro angama-180, cishe. Vele, lekhibhodi ifaka i-trackpad kanye nesifundi seminwe.
Kokunye konke, sibhekene nomunye wemishini esebenza ngezindlela eziningi emakethe. Futhi kuya ngezidingo zakho ungayithola ngaphansi kwe- I-900 euro. Okwamanje, akukho lwazi lokuthi iMicrosoft izoyethula yini le Microsoft Surface Pro LTE eSpain.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » Tablets » IMicrosoft Surface Pro LTE isiyatholakala ukubhukelwa (hhayi eSpain)
Lokhu kubukeka kanjena iHuawei P20, i-smartphone yokuqala enamakhamera ama-3
I-Apple ifuna ukuqeda ifomethi ye-iTunes LP ngo-2019